Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Dhabta & Dhabar Adayga Naftiihuraha JWXO, Q1aad.
Maqaal: Dhabta & Dhabar Adayga Naftiihuraha JWXO, Q1aad.
Dad badan oo kamid ah Soomaalida Ogadenya ayaa caadaystay aflagaadaynta, xaqiraada iyo wax ka sheegida Naftood-hureyaasha Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenya (CWXO) ee kala gaabiyay ciidanka Gumaysiga Itoobiya.
CWXO ayaa dullinimada iyo gumaysiga ka door biday inay naftooda dhaahirka ah u huraan sidii ay dalkooda iyo dadkoodaba uga dul qaadi lahaayeen dulliga iyo heeryada Gumaysiga Itoobiya. Halganku waxa uu baday CWXO dhibaatooyin aan qoraal lagu soo koobi karin balse aan isku dayi doono inaan waxyar ka iftiimino haduu ilaahay yiraahdo.
Maalin kaliya Xarunta Dhexe ee Jabhadda Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO) waxaa kusoo dhacay warbixin sheegaysa in kabadan boqol Naftiihure oo furimaha kala duwan ee dagaalka ku shihiiday. Hadaba akhristoow bal qiyaas maalin qudha iyo boqol wiil oo geesiyaal soo majeesteyaal ah oo naftoodii u huray xoraynta dalkooda uu gumaysigu dullaystay. Sidoo kale waxaad qiyaastaa dhaawaca iyo dhibaatada ka dhalatay meesha ay ku shihiideen boqol naftoodhure!. been iyo male-awaal kugu haasaawin maynee waa dhacdo run ah in subax kaliya intaas iyo ka badan ay Ogadenya u shihiideen.
Hadaba akhristaha sharafta badanow waxaa laga yaabaa inaad iswaydiiso malaha waa hore ayay ahayd wakhtigaas ay maalin qudha boqol naftiihure shihiideen, balse arinku sidaas wuu ka duwan yahay. Tan iyo maalintii uu Ogadenya ka bilowday Halganka ay JWXO hormuudka u tahay iyo wakhtigan xaadirka ah ee aan joogno waxaa maalin kasta qubanayay dhiiga geesiyaasha CWXO ee u istaagay xoraynta ciida hooyo.
Wiilashaasi geel la qaaday ama qabyaalad mayna difaacaynin markay ay dagaalka u istaageen, balse waxay difaacayeen dhulka iyo karaamada umadda Soomaaliyeed ee Itoobiya gumaysato. Waxay difaacayeen jiritaanka iyo xuquuqda shacabka Soomaalida Ogadenya ee Gumaysigu ragaadiyay. Waxay u istaageen oo ay isu xil-qaameen kana dhiidhiyeen dhibka lagu hayo shacabkooda dulman ee xaqiraada iyo cago-juglaynta aan kala joogsiga lahayn lagu hayo.
Sidaas darteed waxaad akhristoow iswaydiisaa, markii ay waxaas oo idil dhacayeen adigu xageed joogtay? Waxaad ku mashquulsanayd danahaada gaarka ah iyo daryeelka qoyskaada. Sidaas oo ay tahay cidna kuguma haysato maxaad karaamada ummadda u difaaci-wayday? Waddanku hadduu xorooba na ninkii shihiiday waxba xorriyaddiisu u tari-mayso (hadduu magac maamuusan helo ayaankii) laakiin adiga iyo tobankaaga caruurta ah ee waxbaratay yaa u aayi doona midhihii ka baxay dhiiga Naftiihuraha CWXO eed ku abaal marisay yasida iyo xaqiraada joogtada ah.
Dhinaca kale waxay balaayo iyo hoog kugu dhacday haddii aan la xoroobin sababtoo ah waxaad ahayd kii u adeegayay cadawga dulaystay dadkaada, waxaad ahayd kii Naftiihuraha u minjo qabanayay cadawga ay ishayeen ee gacan yaraha u ahaa, waxaad ahayd kii cayda iyo aflagaadada aan kala joogsiga lahayn ku asqaynayay Naftiihuraha iyo ehelkiisa ee ku qasbay in shacab aad u tiro badan aad jeelasha Gumaysiga ku dhex ihaanaysatid hooyooyin badana gablanka iyo halaaga badid.
Sidaa awgeed, majirto sabab loo hagardaameeyo wiilashaas iyo hadafkooda xaq iyo xorriyad-doonka ahaa ee lagu difaacayey karaamada umadda Soomaaliyeed iyo dhulkeeda uu Gumaysigu dulaysanayo.